New Skiin Skin Reborn Solution ရဲ့ Promotion လာပါပြီ 🥳 August လ တစ်လလုံး ဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက် အရင်ပေးထားတဲ့ ၁၀ ဘူး ဝယ် FOC ၁ ဘူးအစား ၅ ဘူးဝယ်ရင် FOC ၁ ဘူး ရရှိမှာဖြစ်ပြီး ၁၀ ဘူးဝယ်ရင်တော့ ၂ ဘူး FOC ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ⭐️ Promotion က ဒီ August တစ်လ ထဲနော် ⭐️
🍋🍋🍋တင်းတိပ် အမည်းစက်တွေ ပျောက်ကင်းစေဖို့. 🍋🍋🍋အသားအရေ ကြည်လင်၀င်းပညီညာလာစေဖို့ 🍋🍋🍋အသားဖြူလာစေဖို့ ဆိုရင်တော့ . . . 🍋Garnier Vitamin C Super Essence🍋 နဲ့ 🍋New Skiin Vitamin C Facial Cleanser🍋 တို့ကို တွဲဖက်သုံးကြည့်လိုက်နော်. တစ်လအတွင်း သိသာတဲ့ အကျိုးရလာဒ်ကို တွေ့မြင်ရဖို့ အာမခံပါတယ်. 🍋Garnier Vitamin C Super Essence 30 ml တစ်ဘူး ၁၂၀၀၀ ကျပ်. 🍋New Skiin Vitamin C Facial Cleanser 150g တစ်ဘူး ၉၅၀၀ ကျပ်.
💎New Skiin Facial Foam💎 ကို ရေနည်းနည်းနဲ့ လက်ဖ၀ါးထဲ ထည့်ပွတ်လိုက်ရင် နူးညံ့တဲ့ အမြုပ်လေးတွေ အများကြီးထွက်လာပါတယ်. အဲ့ဒီနူးညံ့တဲ့ အမြုပ်လေးတွေနဲ့ မျက်နှာအသားအရေရဲ့ ချွေးပေါက် အတွင်းထဲအထိ ၀င်ရောက် သန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်. သင့်အရေပြားကို မထိခိုက်စေပဲ မလိုလားအပ်တဲ့ အညစ်အကြေးများကို သန့်စင်စွာ ဖယ်ရှားပေးပါတယ်. ပြင်းထန်တဲ့ Chemical တွေ မပါ၀င်ပဲ အသားအရေရဲ့ pH Balance ကိုပါ ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့အတွက် အရေပြား နုပျိုမှုကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ စိတ်အချရဆုံး Facial Foam ဖြစ်ပါတယ်. 💎New Skiin Facial Foam💎 150g တစ်ဘူး ၉၅၀၀ ကျပ်
New Skiin ရဲ့ Skin Reborn Solution.
"အိမ်တွင်း‌ေအာင်းပြီး အသားအရေတွေ လှလာလိုက်တာ" ဒီလိုဖြစ်နေဖို့ 💎New Skiin Cream💎 ကို မပြတ်တန်း လိမ်းနေတယ်လေ. လူတိုင်းငေးမောအားကျရတဲ့ အသားအရေလေးရရှိဖို့ 💎New Skiin Cream💎 တစ်ထုပ်ပဲလိုပါတယ်. 💎New Skiin Cream💎 5g တစ်ထုပ် ၃၅၀၀ ကျပ်.
မျက်နှာအသားအရေလှဖို့က 💎New Skiin Cream💎 ‌လေး သုံးတယ်လေ. Body အသားအရေလှဖို့ကတော့ 💎New Skiin Supplement💎 ‌လေး တစ်ရက်တစ်လုံး ပုံမှန်သောက်တယ်. ဒါက Stay Home ပြီး ပပ၀တီဖြစ်လာဖို့ Plan. 💎New Skiin Cream💎 5g တစ်ထုတ် ၃၅၀၀ ကျပ်. 💎New Skiin Supplement💎 အလုံး ၃၀ပါ တစ်ဘူး ၂၉၅၀၀ ကျပ်.
မျက်နှာအသားအရေလှဖို့က New Skiin Cream ‌လေး သုံးတယ်လေ. Body အသားအရေလှဖို့ကတော့ New Skiin Supplement ‌လေး တစ်ရက်တစ်လုံး ပုံမှန်သောက်တယ်. ဒါက Stay Home ပြီး ပပ၀တီဖြစ်လာဖို့ Plan. New Skiin Cream 5g တစ်ထုတ် ၃၅၀၀ ကျပ်. New Skiin Supplement အလုံး ၃၀ပါ တစ်ဘူး ၂၉၅၀၀ ကျပ်.
New Skiin Supplement ကို တစ်နေ့တစ်လုံး မှန်မှန်သုံး ‌လောကကြီးမှာ သင်သာအလှဆုံး . . . အစွမ်းထက် Antioxidant များစွာ ပါ၀င်တာ‌ကြောင့် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်ပေးပါတယ်.
Mirror Mirror on the wall !!! Who's the fairest of them all ? မနှင်းဖြူပုံပြင်ထဲက ‌မှော်မှန်ကြီးကို လူတိုင်းသိကြမှာ‌ပေါ့. အလှပဆုံး အဖြူ၀င်းဆုံး အသားအရေပိုင်ရှင်ဖြစ်နေဖို့ ‌မှော်မှန်ကြီးကို ‌မေး‌နေစရာမလိုပါဘူး ‌မှော်‌ဆေးလုံး‌လေးဖြစ်တဲ့ New Skiin Skin Reborn Solution တစ်နေ့တစ်လုံး ‌သောက်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်‌နော်. တစ်လအတွင်းမှာ လူတိုင်း Snow White ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်. NewSkiin Skin Reborn Solution အလုံး ၃၀ ပါ တစ်ဘူး ၂၉၅၀၀ ကျပ်.
First Page « 89» Last Page